निर्वाचनमा कांग्रेसकै बहुमत आउँछ, अबको... :: सुजिता कार्की :: Setopati
निर्वाचनमा कांग्रेसकै बहुमत आउँछ, अबको प्रधानमन्त्री म बन्छुः प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने दाबी गरेका छन् ।
साक्षात्कारमा बोल्दै देउवाले कांग्रेसको बहुमत आउने मात्रै नभएर अबको प्रधानमन्त्री समेत आफू नै बन्ने दाबी गरे। देउवाले थपे,“कांग्रेसको बहुमत आउँछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, सरकारको नेतृत्व म गर्छु।”
जनताले कम्युनिष्ट शासन नरुचाउने उनको तर्क थियो । “कम्युनिष्ट शासन आउनु भनेको महिलाहरुको अधिकार खोसिने हो, जनताको अधिकार खोसिने हो, दलितहरुको अधिकार खोसिने हो, राष्ट्रपति पद्धतीमा जानु भनेको अधिकार खोसिनु हो, यो कुरा जनतलो बुझिसक्या छन्, त्यसैले उनीहरुको पक्षमा किन भोट हाल्ने ? जनताले कांग्रेसलाई नै भोट हाल्छन्।”
उनले आफूले सुदूरपश्चिमको विकासको लागि धेरै काम गरेको विश्वास दिलाए। “मसँग विकासका गुरुयोजनाहरु धेरै छन्, सुदुरपश्चिमका गाउँगाउँमा रोड पुगेको छ। गउदेखि बजारसम्मको बाटोहरु बनेका छन्, किसानहरुले आफ्ना उत्पादन अब गाउँमा बेच्न पाउन्, गाउँठाउँमै बाटो होस् । घरमै बजार आयो, कृषकहरुको देश भएकोले उनीहरुको सहजताका लागि कच्ची बाटाहरुलाई अब पीच बनाईन्छ ।”
देउवाले आफ्नो जित सुनिश्चि भैसकेको समेत दाबी गरे । उनले भने,“अरु जिते माननीय हुने हो, म जिते प्रधानमन्त्री हुन्छु, सुदूरपश्चिमको को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? म त प्रधानमन्त्री भैसकें, अब पनि प्रधानमन्त्री म नै हुँ, मेरो जित भैसक्यो ।”
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर १७, २०७४, ०२:१७:५३